Google Dudziro yakagadziridzwa ichiwedzera mitauro mitsva | IPhone nhau
Iyo Cupertino-based kambani yakatanga chirongwa cheMepu makore mashoma apfuura, chikumbiro chakatora nguva yakareba kuti chibve pasi kuti chinyatso kuve chishandiso chinoshanda chevashandisi. Mune yega yega vhezheni yeIOS, Apple yanga ichivandudza mamapu ekushandisa kuwedzera pakuwedzera matsva maficha kuti uve imwe yechokwadi kune yamasimba ese Google Mepu.
Nekudaro, Apple yanga isingade kupinda zvizere mune nyaya yevashanduri vemitauro, chimwe chinhu chakaitwa neGoogle zvekare, asi kune vakomana vanobva kuCupertino hazvinakidze. Muturikiri weGoogle chave chirevo munyika yeshanduro pane nharembozha nekuda kweiyo yakazara uye inoshanda application iyo iyo yainotipa kwatiri.
Parizvino chirongwa cheGoogle Dudziro inotibvumidza kuturikira pakati pemitauro inopfuura 103 yakanyorwaUye zvakare, zvinotibvumidzawo kuti tishandure pasina kudikanwa kwekubatanidza internet pakati pemitauro makumi mashanu nemaviri. Iko kushandurwa kwekamwe kamera kunotibvumidza kushandisa yedu iPhone kamera kushandura iwo mavara ayo kamera yedu inozivikanwa mumitauro 52 dzakasiyana. Asi zvinotibvumidzawo kuti tishandure nhaurwa dzakananga dzemashoko akataurwa munzira mbiri mumitauro inosvika makumi matatu nemaviri. Sokunge izvo zvaive zvisina kukwana, tinogona zvakare kunyora neruoko iwo mavara atinoda kududzira pakati pemitauro makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe.
Google chete gadziridza zvakare shanduro yekushandura, inosvika vhezheni 5.1.0 nenhau dzinotevera:
Kwakasiyana usability kuvandudza uye kugadzirisa bug.
Shanduro yepamhepo mumitauro 52.
Pakarepo kushandurwa kwekamera kubva kuChirungu kuenda kuChinyore uye Chinyakare Chinese.
Uye zvakare, mitauro mitsva gumi nematanhatu yakawedzerwa.
Mumwedzi ichangopfuura, vashandisi vekushandisa avo vanotibvumidza kuti tishandure pakati pemitauro yakasiyana, vari kuona mabhandiro avo, avanonyanya kubhadhara, ivo vari kurega kushandiswa zvakanyanya uye zvakanyanya nevashandisi mukufarira muturikiri weGoogle iyo yakasununguka zvachose.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google Dudziro inovandudzwa nekuwedzera mitauro mitsva